Gurman oo sheegay in Taxanaha Apple Watch 7 uusan ku dari doonin Dareeraha Dhiigga | Waxaan ka imid mac
Xanta, daadinta falanqeeyayaasha iyo bixiyeyaasha oo ay weheliyaan wararka kale ee shabakadda ayaa tilmaamay maalmo ka hor taas qaabka cusub ee Apple Watch Series 7 wuxuu ku dari lahaa dareeraha cadaadiska dhiigga ama in ugu yaraan Apple uu si adag uga shaqeynayay hirgelintiisa. Dareenkan, dhammaan wararka xanta ah waa in la tixgeliyaa oo waa in Cupertino ay ka shaqeeyaan si saacaddani u yeelato shaqooyinka ugu badan ee suurtogalka ah ee la xiriira caafimaadka.
Ugu dambeyntiina, su’aasha ku saabsan suurtagalnimada ku -daridda dareerahaan Apple Watch maalmo ka hor ayaa lagu daabacay warbaahinta Asia Nikkei, waxay ahayd waxaa si toos ah, si cad oo kooban uga jawaabay Mark Gurman barta bulshada ee Twitter. Qaabka cusub ee Apple Watch Series 7 kuma dari doono dareerahaan, "ma aha in la xuso."
Nikkei Asia ayaa leh dareeraha cadaadiska dhiigga. Wax faallo ah oo ku saabsan arrintaas?
- Steven (@sostevensays) August 31, 2021
Farriinta ayaa la shaaciyey Axaddii la soo dhaafay oo hadda waxay u muuqataa in hadalkan Gurman uu ku dhowaad la xaqiijiyay mar haddii inta badan warbaahintu ku kalsoon tahay hadalkiisa iyo waxay saadaalinayaan naqshadda saacadda lafteeda inay tahay isbeddelka ugu weyn ee qaabkan. Dareenkan, waxay umuuqataa inay adag tahay in lagu daro saacadda noocan ah saacadda, sida ay maanta u muuqato mid aad u dhib badan in lagu daro dareere aan duulaan ahayn si loo cabbiro sonkorta dhiigga, wax aan ka hadalnay muddo dheer oo aan weli ahayn. waxay u muuqataa inay diyaar u tahay saacadan Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Gurman wuxuu leeyahay Taxanaha Apple Watch 7 kuma dari doono Dareeraha Dhiigga
Falanqaynta Teknolojiyada Safari 131 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo